गौचन हत्याका मुख्य योजनाकार बस्नेत पक्राउः को हुन् बस्नेत ? यसकारण भयो हत्या – Etajakhabar
गौचन हत्याका मुख्य योजनाकार बस्नेत पक्राउः को हुन् बस्नेत ? यसकारण भयो हत्या
यसरी पक्राउ परे बस्नेत प्रहरीले बस्नेतको कमजोरी पक्राउ परेका अन्य अभियुक्तमार्फत लियो । हत्यामा प्रयोग गरिएका प्रविधिबारे जानकारी पनि उनीहरूबाटै प्राप्त गर्यो । पक्राउ परेका अभियुक्तले बस्नेत भारतमै लुकेका जानकारी दिए ।
को हुन् बस्नेत ? समिरमानसिंह बस्नेत काठमाडौं–१३ बाफलका स्थायी बासिन्दा हुन् । उनको शैक्षिक योग्यता ं२ अध्ययन हो । कलेज पढ्दापढ्दै उनी चक्रे मिलन उर्फ मिलन गुरुङसँग निकट भए ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर १८, २०७४ समय: ८:०२:५२